Google Play ga-akwado ka ihichapụ ngwa ndị ị na-adịghị eji | Androidsis
Google Play na-arụ ọrụ na itinye ọtụtụ mgbanwe N’izu ndị ọzọ. Storelọ ahịa ngwa ahụ gbanwee usoro akara na August a. Ke adianade do, anyị na-adịghị anya na-atụ anya a ihe ohuru n'ime ya, nke ejiri ule mbu na-eme ugbu a. Ugbu a, anyị maara maka ọrụ ọhụụ a ga-ewebata n'ime ya n'oge na-adịghị anya.
Ọ bụ ọrụ na-ekwe nkwa ịba ezigbo uru iji jikwaa ngwa ndị anyị arụnyere. Ebe Google Play ga-egosi na ka anyị kpochapụ ngwa ndị ahụ anyị anaghị eji kemgbe. Ọ ga na-esochi ojiji anyị ji ha eme ihe ma gwa anyị nke a.
N'ụzọ dị otú a, anyị ga-enwe ike hapụ ohere na ụzọ dị mfe na ekwentị gam akporo anyị. A ọrụ na-ekwe nkwa na-njikọ chiri anya na-ekwe omume nke ihichapụ otutu ngwa ọdịnala n'otu oge, nke dị na Google Play maka ọnwa ole na ole ugbu a. Yabụ, ngwa ndị ahụ anyị anaghị eji ga-ekpochapụ ekwentị.
Na foto ị nwere ike ịhụ etu atụmatụ ọhụrụ a ga-esi rụọ ọrụ. Anyị ga-enweta ọkwa na ekwentị, nke ọ na-agwa anyị na anyị nwere ike ịhapụ ohere site na ihichapụ ụfọdụ ngwa. Ọ na-ezo aka na ngwa ndị a anyị ejirila ogologo oge. Ọ bụrụ na anyị abanye, anyị ga-enwe ozi a.
Enwere ike ịhụ ya na nseta ihuenyo na aka ekpe. Ebe Google Play gosipụtara ogologo oge ole ka anyị jirila ngwa a maka oge ikpeazụ. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike ịhọrọ nke ngwa ndị gosipụtara na ndepụta a anyị nwere ike iwepu na ekwentị. Onye ọrụ ọ bụla ga-ahọrọ ndị ha chọrọ ma si otú a hapụ ohere.
Ọ bụ ọrụ nwere nnukwu mmasị, nke a na-anwale ugbu a. N'ihi ya, o kwesịghị iwe ogologo oge iji wepụta na Google Play maka ndị ọrụ gam akporo niile. Agbanyeghị na enyerebeghị ozi ọ bụla na ụbọchị enwere ike ibido ya. Anyị na-atụ anya ịmatakwu n'oge na-adịghị anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Google Play ga - atụ aro ka iwepụ ngwa ndị ị na - ejighi